Kooxda Riyada Ee Kaka Oo Laga Waayey Messi Iyo 2 Ronaldo + Zidane Ka Dhex Muuqdaan
HomeChampions LeagueKooxda Riyada Ee Kaka Oo Laga Waayey Messi Iyo 2 Ronaldo + Zidane Ka Dhex Muuqdaan
Xiddigii hore ee reer Brazil ee Ricardo Kaka ayaa soo saaray kooxdiisa riyada taas oo uu aaminsan yahay in ay yihiin ciyaartooyadii ugu wanaagsanaa ee uu soo xulan lahaa haddii uu koox samaysan lahaa.
Kaka oo xiddiga adduunka ku guuleystay sannadkii 2007 iyadoo ay la tartamayeen Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa waxa uu ka mid yahay xiddigaha dunida ugu fiicnaa muddooyinkii dambe hase yeeshee qaab ciyaareedkiisa oo lumay markii uu ku biiray Real Madrid ayaa sabab u noqotay in xirfaddiisa uu ula guuro wadanka Maraykanka.
Kaka ayaa waxa uu xirfaddiisa ka soo bilaabay naadiga Sao Paulo halkaas oo uu sannnadkii 2000 ka mid ahaa xiddigihii yaryaraa ee sida diirran uga dhex muuqday kooxdaas laakiin waxa uu uga wareegay AC Milan oo uu kula guuleystay Champions League.
Haddaba, Kaka ayaa waxa uu hadda soo xushay 11 ciyaartoy oo uu ka dhigi lahaa kooxdiisa haddii isaga gacanta loo gelin lahaa awoodda xulashada iyo koox samaysiga isla markaana ay ciyaartooyadaasi da’ yaraan lahaayeen.
Kooxda uu xushay Kaka oo uu u qaabeeyey nidaamka 4-3-3 oo dhamaystiran:
Dida – Inkasta oo Kaka uu la ciyaaray gool-wadeyaal tayo sare leh oo uu ugu horreeyo Iker Casillas oo muddo afar sannadood ah ay u wada ciyaareen Real Madrid, haddana waxa uu doortay in Dida oo ay isku waddan yihiin wakhti badanna ay ku wada qaateen AC Milan uu yahay gool hayaha kooxdiisa.
Maldini, Cafu, Nesta iyo Carlos: Afartan difaac ayuu Kaka kooxdiisa u soo xushay. Maldini waa halyeygii AC Milan kaas oo ay Kaka u wada ciyaareen kooxdaas. Sidaas oo kale, Nesta iyo Cafu ayaa AC Milan ay wakhti badan ku wada qaateen, iyadoo Roberto Carlos uu ka mid yahay xiddigaha dunida ugu wanaagsanaa ee ka ciyaara baasha bidix ee difaaca. Laadkiisa awoodda badan, orodkiisa iyo sida uu u difaaco goolkiisa ayaa mucjiso ahayd. Cafu ayaa isna orod badan lagu yaqaanay isagoo sannadkii 2002 uu Cafu u qaaday xulka dalkiisa koobkii Adduunka ee lagu qabtay Korea Iyo Japan. Dhinaca kale, Nesta iyo Maldini oo ahaa xiddigihii difaaca ee ugu fiicnaa wadanka Talyaaniga ayaa intii ay ciyaaraha ku jireen ay adkayd in ay si sahlan u dhaafi karaan weeraryahannada ka soo horjeedaa, iyadoo Maldini si fiican uu ugu suntan yahay taariikhda AC Milan iyo Talyaaniga oo uu muddo ka badan 20 sannadood u ciyaarayay.
Pirlo, Zidane iyo Iniesta: Shaki la’aan waa dhexdii ugu fiicnayd ee uu soo xulan karayay, waa mishiinno kubadda u dhaqaaqiya dhinaca ay doonaan iyadoo kuwa ka soo horjeedaa aanay awood u yeelan karin in ay xakameeyaan. Dhaqaaqa kaliya ee ay sameeyaan ayay ciyaarta weji kale ugu samayn jireen. Waxa intaas u dheeraa qaabka ay kubadda u samayn jireen, baaska u bixin jireen, gool toogasho iyo waliba aragtida fog ee ay ciyaarta oo dhan dusha kala socdaan.
Ronaldinho, Cristiano Ronaldo iyo Ronaldo: Saddexdan ciyaartoy oo koox isugu yimaadda iyagoo iska garab ciyaaraya, shaki kuma jiro in dawakhaad ay dunida ku ridi lahaayeen, ayna guulo badan gaadhsiin lahaayeen kooxda ay u ciyaarayaan. Kaka saddexdan laacib ayuu u soo qaaday in ay ka wada ciyaaraan kooxdiisa, iyadoo uu xiddigihii weynaa ee reer Brazil ee Ronaldo afka hore istaajiyey sida shaxdiisa ka muuqata, halka Ronaldinho iyo Cristiano ay labada dhinac ee weerarka kala taagan yihiin.
Watch: FA Cup Draw
Kooxda Manchester City Oo Ku Kuftay Villa Park Iyadoo Aston Villa Ay Barbaro Ku Celisay